Ao Thailandy avaratra, ahafahan’ny vehivavy voafonja manarina ny fiainana indray ny fianarana manotra · Global Voices teny Malagasy
Ao Thailandy avaratra, ahafahan'ny vehivavy voafonja manarina ny fiainana indray ny fianarana manotra
Voadika ny 13 Septambra 2015 9:22 GMT
Gadra mikojakoja tarehy iray andro alohan'ny handraisana mpanjifa hohorina. Sary nalain'i Anne Bailey. Nahazoana alalana avy amin'ny PRI
Ity lahatsoratra sy tatitra radio nataon'i Anne Bailey ho an'i The World nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 8 Septambra 2015 ity dia navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizaram-botoaty.
Niteny i Ponnipa Chanpeng fa tsy manana safidy hafa intsony izy. Maty avokoa ny ray amandreniny, fony izy 22 taona, ka nahatonga azy hikarakara ny anadahiny tanora kokoa noho izy — sy ny trosan-drainy. Tsy afa-nanampy ny fianakaviana. Nanadala azy isan'andro ireo tompon-trosa. Tsy hanome trosa azy ny Banky. Ka dia nanao safidim-pamoizampo. Safidy nitondra azy tany am-ponja.
Nihaniakatra ny tahan'ny fampidirana amponja ny vehivavy tao Thailandy. Tanelanelan'ny 2006 sy 2012, niakatra efa ho 50 isanjato ny isan'ny vehivavy any amponjan'i Thailandy, ka ny ampahany be tamin'izany dia avy amin'ny fampiasana, famokarana na fivarotana rongony [na fanafody tsy ara-dalàna] — methamphetamine amin'ny ankapobeny. Na dia tsy ho avelan'ny manampahefanan'ny fonja hanontany ny antsipirihan'ny helok'i Chanpeng (na haka sary azy aza) aho, dia nolazainy fa nikasa nanao “izany” indray mandeha na indroa izy. Izay hahazoana vola ampy hamerenana ny trosan-drainy. Saingy voasambotra izy avy eo.
Ao amin'ny tokotany manginan'ny Foibe Fiofanan'asa ho an'ny Vehivavy ao Chiang Mai, tsy ho hitanao amin'ireo vehivavy mamafa sy manadio ireo akory ny endrika maha jiovavy ikoizana azy ireo. Tsy ho vehivavy hanapa-dalana anao akory aza izy ireo. Saingy miara-migadra ao amin'ny Toby Fanarenana ny Vehivavy avokoa izy rehetra ary mihoatra ny 85 isanjato no mitovy heloka amin'i Chanpeng, noho ny rongony.
Ny talen'ny Toby Chiang Mai Fanarenam-Behivavy Arirat Thiamthong. Sary nalain'i Anne Bailey. Nahazoana alalana tamin'ny PRI
Nilaza i Arirat Thiamthong, talen'ny Toby Fanarenana, fa tsy zava-tsy mahazatra ny raharaha Chanpeng. Ny vehivavy avy amin'ny foko any an-tendrombohitra — voambolana manjavozavo nampiasaina hamariparitana ireo vondrom-piarahamonina vitsy an'isa monina any avaratra — di amiatrika adidy ara-kolontsaina manokana izay mety mahatonga azy ireo hiafara eto amin'ny ampahany.
“Manana adidy mavesatra amin'ny fianakaviany raha ohatrina amin'ny adidy omena ny lehilahy” ireo vehivavy ireo, hoy i Thiamthong. “Tsy maintsy mikarakara ny ankizy sy ny zavatra hafa rehetra ao amin'ny fianakaviana izy ireo, ary rehefa tsy afa-mamahana ny fianakaviana ry zareo, dia mora dia mora ny mandresy lahatra azy ireo hanao ity karazan-javatra ity.”
Milaza ny tompon'andraikitra fa mila mijery ny antony nahatonga azy hiafara any ampigadrana ny voafonja Chanpeng.
“Voatery manao izany ny zazavavy sasantsasany. Ary raha tsy voatery ho nanao izany ny zazavavy sasantsasany dia mety ho noterena,” hoy ravehivavy.
Lamba mihahy ao amin'ny Toby Fiarenam-Behivavy ao Chiang Mai. Sary nalain'i Anne Bailey. Nahazoana alalana avy amin'ny PRI
Raha tsy jerena indray ny amin'izay voateny izay, dia ambany dia ambany kosa ny taham-pamerenan-keloka ao amin'ny Toby Fiarenana ao Chiang Mai. Izany dia noho ny ezaka lehibe nataon'ny Tompokovavy ny Printsesy Bajrakitiyabha Mahidol. Mpisolovava mavitrika miaro ny zon'ny vehivavy voafonja tokoa ity mpikambana ao amin'ny fianakaviam-Panjaka ity hatramin'ny 2006, rehefa nanokatra ny fisantaran'andraikitra nantsoina hoe “Inspire” izy. Ny tanjon'izany dia ny hanatsarana ny fiainan'ny reny voafonja sy ny hanampiana azy ireo ho afa-miditra tsara indray ao amin'ny fiarahamonina rehefa afahana izy ireo. Vokatra mivantana avy amin'ny ezaka ataon'ny printsesy ny Toby Fiarenana ao Chiang Mai.
Isan'andro dia misy filaharam-panjifa, ary mpizahatany ny ankamaroany, manao famandrihana hohorina ao amin'ny Toby Fiarenana. Feno vetivety ny toerana, ary maro ireo lazaina hiverina ny ampitso fa tsy araka intsony.
Ankoatra ny fanorana, dia mianatra mandrary, mahandro hanina, manao amboradara ary asam-barotra hafa ihany koa ny voafonja. Sary nalain'i Anne Bailey. Nahazoana alalana avy amin'ny PRI
Nilaza ny tale Thiamthong fa alohan'ny [amotsorana] azy ireo dia mahazo vola bebe ihany ny voafonja. Raha tsy mahita asa hafa handoavana ny faktiora ry zareo rehefa avotsotra dia mety hiverina amponja indray. Taorian'ny fanazarana manontolo amin'ny fanaovana otra, dia mety hahazo hatramin'ny 30000 Thai baht isambolana (manodidina ny $870) ry zareo, ary ampy tsara izany karama izany ao Chiang Mai.
Fantatr'ireo tranombarotra mpanao masazy ao Chiang Mai fa nahazo fanarazana avo lenta ireo vehivavy ireo ary mavitrika ry zareo amin'ny fandraisana mpiasa nahazo diplaoma. Mahazo fifanarahana ofisialy amin'ny toby mihitsy aza ry zareo amin'ny hampiasan-dry zareo voafonja efa nahazo diplaoma ka dia samy mahazo tombontsoa ny roa tonta.
Mahasoa an'i Chanpeng, izay efa manapitra ny telo taona farany igadrany ko ho lasa mpanotra rehefa mivoaka, izany rehetra izany. Saingy mbola nalahelo ihany aho rehefa niresaka taminy. Noho ny fikarakarany ny fianakaviany no nandaniany ny 17 taona an-tranomaizina. 22 taona izy tamin'izany fotoana izany; vao nodimandry ny ray amandreniny, ary diso safidy izy. Nahavita nanao zavatra hafa ve aho raha tratran'ny toe-draharaha tahaka izany?
40 taona ankehitriny i Chanpeng ary toy ny mahita ny tenany amin'ireo vao tonga ao am-ponja isan-kerinandro.
Voafonja mikarakara ny tokotanin'ny toby mialoha ny hahatongavan'ny mpanjifa isa-maraina. Sary nalain'i Anne Bailey. Nahazoana alalana
“Malahelo azy ireo aho, ary malahelo ahy koa satria nanary ny hoaviko,” hoy izy. Saingy ankehitriny, farafaharatsiny, efa mba fantany ny ataony amin'ny manaraka.
“Manome fitokisa-tena bebe kokoa ho ahy hizotra amin'ny fiainana izany,” hoy izy. “Tsy hivarotra rongony tahaka ny nataoko tamin'ny farany aho. Mieritreritra aho fa efa hitako ny lalako.”